Chelsea oo ku Wargalisay Real Madrid lacagaha ay kaga iibineyso Edan Hazrad - Wargane News
Home Sports Chelsea oo ku Wargalisay Real Madrid lacagaha ay kaga iibineyso Edan Hazrad
Chelsea ayaa dooneysa lacag rikoodha oo gaaraysa £200 milan oo gini hadii ay iibinayaan xagaagan laacibkooda Eden Hazard.
Real Madrid weli waa mid daneyneysa Hazard laakiin Chelsea ayaa ku beecin doonin xiddigooda qiimo jaban iyagoo og in qiimaha lacagaha ay dalbanayaan ay marxalad adag ku tahay daaqada kala wareega xagaagan.
Hazard ma uu doonayo inuu dhaqaaqo iyadoo macalinka Chelsea Maurizio Sarri uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo isaga iyo laacibka Willian, kasoo waayay u dhaqaaqida Barcelona.
Yeelkeeda, waxaa jira walaac sii kordhaya oo ah in cayaariyahanka Belgian uusan kordhin doonin qandaraaska Stamford Bridge. Waxaana kaga hartay laba sano heshiiska uu kooxda ku joogo laakiin waxuu iska diiday heshiis cusub uu qiimihiisu ku kacayo asbuucii £300,000 oo gini.
Chelsea ayaa sido kale go’aan ka gaari doonta goolhayaheeda Thibaut Courtois kasoo isna bartilmaameed u ah Real Madrid marka uu kasoo laabto fasaxa.
Si kastaba ha noqotee, Courtois sanad kaliya ayaa kaga hartay heshiiskiisa iyadoo aysan jir wax wadahadalo ah oo dib u bilaawday tan iyo markii ay burbureen bishii May.
Waxaa laga yaabi karaa inay u dhaqaaqaan goolhayaha Everton ee Jordan Pickford si uu badal ugu noqdo ninka reer Belgium laakiin Everton ma dooneyso inay beeciso iyadoo tixgelinaya heshiiska cusub ee goolhayahooda England.